त्यो अन्तिम पत्रमा जसमा थियो: “म तिमीलाई छाडेर जान सक्दिन मात्रै भनेको भए मैले मर्नुपर्ने थिएन” एउटी चरीको कथा – Tufan Media News
त्यो अन्तिम पत्रमा जसमा थियो: “म तिमीलाई छाडेर जान सक्दिन मात्रै भनेको भए मैले मर्नुपर्ने थिएन” एउटी चरीको कथा
१९ जेष्ठ २०७८, बुधबार १९:४२
एउटा जंगलको रुखमा गुड बनाएर एक जोडी चरा बसेका थिए । यो जोडी एक अर्का लाई अति माया गर्थे । चरी असाध्यै राम्री थिई । सँगै बसेर यो जोडि खुब प्रेमालाप गर्थे । एक दिन प्रेमा`लापकै सिलसिलामा चराले चरीलाई भन्छ :
चरा : तिमी असाध्यै राम्री छौं । म बुढो हुन लागेँ, तिमीले कतै मलाई छाडेर त जान्नौ नी रानी ?
चरी : म कतै जान खोजे छु भने तिमी मलाई छोप्नु नि त !
चरा : छोप्न त छोपौला प्रिय, तर मन उडाइ`सकेकी तिमीलाई आफ्नै बशमा राख्न नसकुला की भन्ने पीर लाग्छ ।
आफ्नो श्रीमानको यस्तो कुरा सुनेपछि चरीले आँखाभरी आँसु बनाउँछे । रोक्न खोज्दा खोज्दै चरीले आँ`सु झार्छे । उसलाई अ`सह्यै पी`डा हुन्छ । त्यसपछि चरीले आफ्ना दुबै पखेटा काटि`दिन्छे । र भन्छे अब म तिमी`लाई छाडेर कतै जान्न । त्यसपछि पनि यो जोडि हाँसिखुशी बसिरहेकै हुँन्छ । चराले हरेक दिन खानेकुरा खोजेर ल्याउँछ र दुबै मिलेर खान्छन् ।
हुरी बतास सहितको पानी आउँ केहि समय पछि तुफान थामीयो । चरा फर्केर गुडमा आउँछ । चरी मरि`सकेकी हुन्छे । चरीको मृ`त शरिरसँगै एउटा कागज फेला पर्छ । त्यो चराले खोलेर पढ्छ । कागजमा लेखिएको थियो ‘तपाईले म तिमीलाई छाडेर जान सक्दिन मात्रै भन्दिनु भएको भए मैले हुरी आउँनु पहिल्यै म`र्नु पर्दैनथ्यो ।’
( सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको यो मनछुने कथा हामीले प्रस्तुत गरेका हौं।) – साङ्केतिक तस्बिर
मेरो मृ’त्यु पनि तिमिलाई
तिम्रो छालाको बेल्ट मेरो
सन्ध्या भन्छिन्- से-क्स भनेपछि
एउटा ‘छोरीको व्यथा’ जुन